FAQs - JINDONGCHENG ELECTROMECHANICAL FITAOVANA CO., LTD.
Andriamby BOX SY PAN notapahiny 320E
Andriamby BOX SY PAN notapahiny 420E
Andriamby BOX SY PAN notapahiny 650E
Andriamby BOX SY PAN notapahiny 1000E
Andriamby BOX SY PAN notapahiny 1250E
Andriamby BOX SY PAN notapahiny 2000E
Andriamby BOX SY PAN notapahiny 2500E
Andriamby BOX SY PAN notapahiny 3200E
MESINY MITENDRIKA NY VOAFETRA
STAN'NY GRINDERA ANGLE
MESIN'NY BANDSAW CUTTING
MESINY FAMPIANARANA TANANA ELETRIKA
MESINY RIVETING HYDRAULIC
NY SLOTTED CLAMPBAR
TOLE PRESS TOOL
Q Ahoana no mampiasa ny milina?
A ianao mametraka ny sheetmetal workpiece ao ambanin'ny clampbar, mifamadika amin'ny clamping, dia mitarika ny lehibe tahony (s) mba manenjana workpiece
Q Ahoana no clampbar nifatotra?
A ampiasaina, izany dia natao teo anilan'ny lavaka tena mahery vaika electromagnet. Tsy maharitra nifatotra, fa izany dia miorina amin'ny toerana marina anilan-doharano-mavesatra entana isaky ny baolina farany.
Zavatra tsy mamela anao hamorona fandaharana mikatona sheetmetal endriny, ary koa ny swap hafa clampbars haingana.
Q Inona no ambony indrindra sakan'ny taratasy dia manenjana?
A Ho manenjana 1,6 mm ny antonony tsara ny hafanana vy taratasy ao amin'ny halavan'ny feno ny milina. Tsy mahahenjana matevina ao amin'ny halavan'ny fohy.
Q Ahoana ny aluminium sy Stainless vy?
A es, ny JDC hiondrika milina no manenjana azy ireo. Ny fanindrahindram mandalo azy ireo, ary dia misarika ny clampbar nidina teo amin'ny sheet.It dia manenjana 1,6 mm ny aluminium tanteraka lavany, ary 1.0 MG Stainless vy amin'ny halavan'ny manontolo.
Q Ahoana no hanaovanao azy clamp?
Ianao mibosesika ary vetivety mihazona ny maitso "Start" bokotra. Izany no mahatonga ny andriamby clamping hazavana. Rehefa misintona ny tahony lehibe izany avy hatrany Switches ny fahefana feno clamping.
Q Ahoana no tena manenjana?
A Ianao mamorona ny manenjana tanana amin'ny alalan'ny mitarika ny tena tahony (s). Izany bends ny sheetmetal manodidina ny anoloan'ny lelan-clampbar izay natao tao toerana magnetically. Ny zoro mety ambaratonga eo amin'ny tahony milaza aminao ny fiolahana ny hiondrika andry eo amin'ny fotoana rehetra.
Q Ahoana no hanafaka ny workpiece?
A Rehefa hiverina ny tena mitana ny andriamby Switches hoazy eny, ary ny clampbar tampoka ao amin'ny lohataona-mavesatra entana fanampian'ny baolina, namoaka ny workpiece.
Q Tsy misy residual fanindrahindram sisa ao an-workpiece?
A Isaky ny milina Switches eny, fohy mifanohitra fitepon'ny fony ny amin'izao fotoana dia naniraka tany amin'ny ny electromagnet mba de-magnetise iny sy ny workpiece.
Q Ahoana no hanitsy ny hatevin'ny vy?
A By manova ny adjusters isaky ny faran 'ny tena clampbar. Io fahazoan-dalana manova ny hiondrika eo amin'ny anoloan'ny clampbar sy ny miasa amin'ny hiondrika ambonin'ny andry rehefa niakatra ny andry dia eo amin'ny 90 ° toerana.
Q Ahoana no hanangana nanakodia sisin'ny?
A By mampiasa ny JDC hiondrika milina mba mamatotra ny sheetmetal tsikelikely manodidina ny halavan'ny vy tsotra sodina na ny manodidina fisotroana. Satria ny milina miasa magnetically mety clamp zavatra ireo.
Q ve izany no pan-notapahiny clamping rantsan-tànany?
A Izany dia napetraka ny fizarana fohy clampbar izay azo plugged miaraka noho ny famoronana boaty.
Q Inona locates ny fizarana fohy?
A Ny plugged miaraka fizarana ny clampbar tanana dia tsy maintsy hita eo amin'ny workpiece. Fa tsy toy ny vilany hafa freins, amin'ny lafiny roa ny baoritra dia mety ho ny tsy manam-petra avo.
Q Inona ny slotted clampbar for?
Ny Izany dia noho ny mamorona marivo trays sy ny vata latsaky ny 40 mm ny lalina. Tsy misy toy ny voatery fanampiny ka haingana kokoa ny fampiasana noho ny faneva fizarana fohy.
Q Inona no halavan'ny ny lovia afaka ny slotted clampbar aforeto?
A Afaka mamorona misy halavan'ny ao anatin'ny lovia ny lavan'ny clampbar. Tsirairay slots roa dia manome ho miovaova toy habe mihoatra ny 10 mm ny isan-karazany, ary ny toerana ny slots tsara efa niasa avy mba hanomezana mety habe rehetra.
Q Tena mahery ny andriamby?
A Ny electromagnet afaka clamp amin'ny 1 tonne-kery ho an'ny isaky ny 200 mm ny halavany. Ohatra, ny 1250E clamps hatramin'ny 6 taonina eo ny halavan'ny feno.
Q Ho rovitra ny fanindrahindram?
A No, tsy toy maharitra avoakan'ireo andriamby, ny electromagnet tsy afaka taona na hampihena noho ny mampiasa. Izany dia tsotra vita tamin'ny vy avo-carbone izay miankina fotsiny amin'ny ny herinaratra ao amin'ny coil noho ny magnetisation.
Q mains famatsiana Inona no ilaina?
A 240 volts As. Ny modely kely kokoa (ho amin'ny Modely 1250E) mihazakazaka avy tsotra 10 Amp fivoahan'ny. 2000E modely ho miakatra mila 15 Amp fivoahan'ny.
Q Inona no fenitra Accessories avy toy ny JDC hiondrika milina?
A ny jiro, backstops, clampbar lavany manontolo, dia napetraka ny clampbars fohy, ary ny boky no namatsy rehetra.
Q Inona no Accessories-katerena?
misy ahitana ny tery clampbar, dia slotted clampbar noho ny mamorona marivo boaty conveniently kokoa, ary ny hery Seara amin'ny mpitari-dalana ho an'ny mahitsy nanova-maimaim-poana hamboatra sheetmetal.
Modle rehetra efa ao amin'ny tahiry dia afaka mandamina fandefasana entana ho anareo ASAP
Q Shipping lafiny?
320E: 0.5mx 0.31mx 0.28m = 0.053m³ @ 30 kilao
420E: 0.68mx 0.31mx 0.28m = 0.06m³ @ 40 kilao
650E: 0.88mx 0.31mx 0.28m = 0.08m³ @ 72 kilao
1000E: 1.17mx 0.34mx 0.28m = 0.11m³ @ 110 kilao
1250E: 1.41mx 0.38mx 0.33m = 0.17m³ @ 150 kilao
2000E: 2.2mx 0.33mx 0.33m = 0.24m³ @ 270 kilao
2500E: 2.7mx 0.33mx 0.33m = 0.29m³ @ 315 kilao
3200E: 3.4mx 0.33mx 0.33m = 0.37m³ @ 380 kilao
Q Example endriny
Hems, Any-zoro bends, nanakodia sisiny, Nanamafy taolan-tehezany, Mihidy fantsona, Boxes, nanapaka saha niandrasana azy, fantsona lalina, Miverena bends, Deep vombony
Q Ny Lafitsara
1. Be javatra iray lehibe kokoa noho ny mahazatra sheetmetal benders.
2. Tsy misy fetra ny halalin'ny baoritra.
3. Afaka hanangana fantsona lalina, ary dia mihidy tanteraka fizarana.
4. Automatic clamping sy unclamping fandidiana haingana dia midika hoe, tsy reraka.
5. marina sy famantarana foana ny hazo zoro.
6. haingana sy araka ny marina ny zoro toerana fijanonana.
7. Tsy misy fetra tenda halaliny.
8. Infinite hiondrika lava amin'ny dingana azo atao.
9. Open tapitra nanaovana mamela hanohon endriky ny sarotra.
10. Machines azo ganged farany-to-end ho ela hiondrika.
11. Adapts mora ny namboarina tooling (clamp barany hazo fijaliana manokana-fizarana).
12. Self-miaro - milina tsy azo tena tototry.
13. madio sy milamina, voalamina tsara sy famolavolana maoderina.
Tetikasa School : fitaovana vata, letterboxes, cookware.
Electronics : chassis, boaty, racks.
BIROTIKA : talantalana, cabinets, solosaina-masoandro.
Food fanodinana : Stainless milentika & dabilio tampon, setroka hoods, boaloboky.
Nanazava famantarana & vy soratra.
Heaters & varahina canopies.
Orinasa mpamokatra entana : Prototypes, famokarana zavatra, milina fonony.
Herinaratra : switchboards, fefy, fahazavana Fittings.
Automotive : fanamboarana, mpanao dia lavitra, Van vatana, fifaninanana fiara.
Fambolena : milina, pako, feeders, Stainless ronono fitaovana, heva.
Building : fankatovany, facias, garazy varavarana, shopfronts.
Garden heva, fitaratra-trano, fefy lahatsoratra.
Famerana mari-pana : ducts, farantsa tetezamita, efitra mangatsiatsiaka.
Q Ny tsy manam-paharoa centerless iombonana amin'ny savily
izay efa nanjary indrindra fa ho an'ny ™ ny JDC Bend, dia zaraina eny an-halavan'ny ny hiondrika andry ary dia toy izany, tahaka ny clampbar, maka entana hiondrika akaikin'ny toerana izy ireo mitambatra generated.The vokatry ny andriamby clamping amin'ny fomba miankina centerless manokana fa ny JDCBEND ™ dia tena voalamina tsara, habakabaka famonjena, milina tamin'ny hery avo dia avo-to-lanja tahan'ny.
fa toerana, ny workpiece
fa mamorona marivo boaty haingana kokoa
improvised haingana azo avy amin'ny tapa-vy mba hanampy heny-up sarotra endriny, ary ny asa famokarana clampbars ny faneva dia azo soloina amin'ny alalan'ny tooling manokana.
Q Operating boky fampianarana
milina avy amin'ny boky tsipiriany izay mandrakotra ny fomba fampiasana ny milina ary koa ny fomba hanaovana zavatra iombonana maro.
dia kokoa noho ny roa-polo interlock herinaratra izay miantoka azo antoka mialoha clamping hery dia ampiharina eo anatrehan'ny clamping feno mitranga.
12-diso manarona volana fiantohana sy ny fitaovana nanaovana ny milina sy ny fitaovana.
Q OEM sy ODM
Orinasa izahay, manaiky OEM sy ODM, ary mandritra ny fotoana maharitra no hanao fiaraha-miasa amin'ny orinasa maro noho ny vidiny mirary, asa fanompoana tsara dia tsara.
Q Manana taratasy taona
eny, izahay manana fanamarinana, ampahafantaro ahy raha toa ka mila izany, dia handefa izany aminareo.
Q ve ato aminareo misy mpandraharaha any USA.
ENY, Manana, aoka hahafantatra raha toa ka mila fanampiana, Izaho haniraka anao ny fifandraisana Tel NO.
Q no misy taratasy fanamarinana ny niaviany?
eny, ny fanamarinana niaviany misy